Ny Karàna dia ireo Indiana sy Pakistaney izay nifindra monina eto Madagasikara nanomboka tamin' ny faramparan' ny taonjato faha-17. Amin' ny heviny mifintina dia ireo Indiana eto Madagasikara ihany no lazaina fa Karàna, fa amin' ny heviny mivelatra kosa dia mahafaoka ny Indiana sy ny Pakistaney any India sy Pakistàna na any amin' ny firenena hafa koa ny teny hoe Karàna. Miisa eo amin' ny 25 000 eo ho eo ny Karàna eto Madagasikara araka ny antontanisan' ny Ministeran' ny raharaham-bahiny indiana. Ny ankamaroan' ireo Karàna tonga teto Madagasikara dia manaraka ny fivavahana silamo siita sady avy any Gujerat, faritra any amin' ny tapany avaratra-andrefan' i India.
Ny teny hoe Karàna dia mety avy amin' ny teny sanskrita hoe karan na ny teny hindý hoe Karânî (na Kirânî), izay ampiasaina ao India hanondroana ny mpitan-tsoratra manoratra amin' ny teny anglisy.
Ny ankamaroan' ny Karàna dia avy amin' ny faritra eo amin' ny sisin-tany iraisan' i India sy i Pakistàna (faritr' i Kutch sy ny faritr' i Kâthiâwar ao Gujarat, ary i Sindh). Tamin' ny fahatongavan' izy ireo dia tsy nisy ny fanavahana satria fiteny ny hoe "Empira Britanikan' i India" izay nahafaoka an' i India sy Pakistàna. Ny sasany amin' izy ireo dia tsy olom-pirenena malagasy (tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy na dia efa nonina teto Madagasikara nandritra ny taonjato roa. Maro noho izany ireo mbola mizaka ny zom-pirenena frantsay satria tsy mizaka zom-pirenena hafa.
Môskea kôja ao Fianarantsoa
Tamin' ireo taona 1780 dia nisy fianakaviambe indiana, nahitana mpivarotra niisa 200 any ho any, niforona tao Mahajanga, izay seranan-tsambo any amin' ny morontsiraka avaratra-andrefan' i Madagasikara, akaikin' ny helodranon' i Bombetoka, eo amin' ny vavan' ny reniranon' i Betsiboka. Tsy mazava ny momba ny tena satan' izy ireo; indraindray izy ireo milaza fa Malagasy mba tsy hiharan' ny lalàna mandrara ny fananana andevo na mandrara ny fanorenana trano vato, izy samy raràna tsy hataon' ireo olom-pirenena britanika, ny botrin' izy ireo anefa mampiasa ny sainam-pirenena frantsay amin' ny fitaterana entam-barotra avy ao Afrika na mankao.
Ny Miozilmana kôja (ankehitriny miisa 20 000 any ho any raha atambatra ny eto Madagasikara sy La Réunion ary Maorisy) sy ny Ismaily ary ny Bôrà Daody no tonga voalohany, izay narakarahin' ny Hindo taty aoriana.
Nahitana Idiana miisa 4 480 teto Madagasikara araka ny fanisam-bahoaka tamin' ny taona 1911, ka 21 %n' ny mponina vahiny izany sady laharana faharoa manarakaraka ny Frantsay. Noho ny famadihana ho fananam-pirenena ny fandraharahana orinasa tsy miankina tamin' ireo taona 1970 dia maro ny Indiana voatery nandao an' i Madagasikara. Ny ankamaron' ireo izay nijanona kosa dia nanangana tsikelikely ny orinasany. Tamin' ny taona 2000 dia heverina ho misahana ny 50 hatramin' ny 60 %n' ny fiharian-karena eto Madagasikara izy ireo, ka matetika lasibatry ny mpanao fihetsiketsehana mandritra ny fotoana misy hotakotaka.
Ny Karàna eto Madagasikara dia miteny gojaraty sy malagasy ary frantsay. Misy koa ireo miteny anglisy, tamily, hindy, ary miteny amin' ny fiteny hafa any India. Ny Karàna sasany manaraka ny fivavahana hindo, ny sasany manaraka ny silamo (sonita, siita, bôrà, nizarita).
Ny foko eto Madagasikara: Antefasy - Antemoro - Antesaka - Antankarana - Antambahoaka - Antandroy - Antanosy - Bara - Beosy - Betsimisaraka - Betsileo - Bezanozano - Mahafaly - Makoa - Masikoro - Merina - Mikea - Sakalava - Sihanaka - Tanala - Tsimihety - Vezo - Zafimaniry - Zafisoro.
Ny vahoaka hafa eto Madagasikara: Sinoa eto Madagasikara - Vazaha eto Madagasikara - Karàna
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Karàna&oldid=1043721"
Dernière modification le 9 Febroary 2022, à 11:59
Voaova farany tamin'ny 9 Febroary 2022 amin'ny 11:59 ity pejy ity.